गोकुलका कारण बालकोट नै गन्हायो भन्दै गोकुललाई बालकोट छोड्न अल्टिमेटम ! (भिडियोसहित) – Halkhabar kura
१२ फाल्गुन २०७६, सोमबार १५:२३
गोकुलका कारण बालकोट नै गन्हायो भन्दै गोकुललाई बालकोट छोड्न अल्टिमेटम ! (भिडियोसहित)
एकाबिहानै ओलीनिवास घेर्न पुगे बालकोटबासी !
निवर्तमान गोकुल बाँस्कोटाले घुस माग्दै गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि आफ्नो ठाउँकै इज्जतमा दाग लागेको भन्दै बालकोटवासी रुष्ट भएका छन् । उनीहरुले बाल्कोटलाई भ्रष्टाचार गर्नेहरुको अखडा भनेर चिनिन थालेको भन्दै रोष ब्यक्त गरेका छन् । भर्खर आफुलाई काभ्रेवाट आएको बताउने एक महिलाले आफुहरुले दिएको भोट खेर गएको महशुष आफुले गरेको बताएकी छन् । बालकोटका स्थानिय बासीन्दाले बाल्कोटमा बस्न आउने र उनीहरुले गरेको अनैतिक कृयाकलापका कारण आफुहरुको ठाउँ नै दुषीत भएको प्रतिकृया दिए ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीको समुहमा रहेर सकृय महिलाले आफुहरुले अब अजयबावु सिवाकोटीको कामलाई सहयोग गर्ने बताइन् । उनले अजयलाई सम्मान गर्दै बाँस्कोटालाई कारवाही गर्नुपर्ने माग राखेकी छन् । ज्ञानेन्द्र शाहीसंग आफुहरुले मिलेर थालेको अभियान सफल भएको उदाहरणलाई पनि बाँस्कोटाको पर्दाफासलाई लिनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले संचारमन्त्री भएर बाँस्कोटाले ल्याउन लागेको मिडिया नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण पनि उनले कसैको साथ नपाएको बताइन् । उहाँले ल्याएको नियन्त्रणमुखी नीति नै कसैलाई मन परेको थिएन । प्रधानमन्त्रीको पृय पात्र भएका कारण मात्र उहाँ सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, ति महिलाले भनिन् ।
साथै शनिबारको नेकपा पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यसंयन्त्रले बाँस्कोटामाथि छानविन गर्ने भनेर टेप प्रकरणमाथि अनुसन्धान हुने संकेत दिइसकेका हुन । त्यसो त आइतबार हेटौडा पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान हुने प्रष्ट पारेका छन्। बाँस्कोटामाथि देखाबटी छानविन मात्रै हुन्छ कि अनुसन्धान गरि कानूनी कारवाही प्रकृया नै अघि बढ्छ भन्ने अझै प्रष्ट भैसकेको छैन् ।
तर अडियो टेपबाट नै उनीमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भने बाटो खुलेको छ । यसअघि आफ्नै आयुक्त राजनारायण पाठकलाई अडियो टेपकै आधारमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । के अख्तियारले त्यसैगरि बाँस्कोटा र बिचौलिया विजय मिश्रलाई कानूनी प्रकृयामा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन त ?प्रधानमन्त्री निकटस्थ सहयोगी र शक्तिशाली मन्त्री नै नै झण्डै एक अर्ब कमिसनको मोलमोलाइमा स‌ंलग्नु हुनुले भ्रष्टाचारको भयाबह अबस्थालाई छताछुल्ल पारेको त छँदैछ ।
विचौलिया मिश्रलाई त संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विज्ञका रुपमा बैठकमै बोलाएर छलफलसमेत गरेको थियो । त्यसैले यस प्रकरणमा गहन अनुसन्धान गर्ने हो भने अरु धेरै तथ्य बाहिर आउन सक्छ ।
Previous ७० करोड कमिसनको अडियो सर्वप्रथम ओलीलाई नै बुझाएको सबुतप्रमाणसहित रविले देखाएपछि EXCLUSIVE भिडियो
Next यी हुन ‘नाटक घरकी रानी’ जसले दर्जनौ चलचित्र २०० बढी नाटक र ३ हजार भन्दा बढी सडक नाटकमा अभिनय गरेकी छन् (भिडियो)